Nepali Rajneeti | ‘आइसियू खाली छ?’ भन्दै काठमाडौंका डाक्टरलाई तारान्तार फोन
‘आइसियू खाली छ?’ भन्दै काठमाडौंका डाक्टरलाई तारान्तार फोन
बैसाख १३, २०७८ सोमबार २३८ पटक हेरिएको
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले भने, ‘हिजोमात्र मलाई झन्डै चालिस जनाले आइसियूका लागि फोन गर्नुभयो। तर अस्पतालमा राख्ने ठाउँ छैन।’
‘नेपालगञ्ज, बुटवलबाट आइसियूका लागि फोन आउँछ। अब टिचिङले मात्र सक्ने कुरा हुँदैन। अब त्यहाँका बिरामीलाई त्यहीँ हेर्नुपर्छ,’ काफ्लेले भने।
उनले रातका समयमा धेरै फोन आउने भन्दै सेतोपाटीसँग भने, ‘रातरात फोन आउँछ। कुनै काठमाडौंबाट र कुनै बाहिरबाट पनि हुन्छ। आज रातिमात्र चार जनाले आइसियूका लागि फोन गर्नुभएको थियो।’
‘बुटवल, पाल्पा र नेपालगञ्जबाट पनि फोन गर्नुहुन्छ। तर यहाँ बेड खाली छैन। त्यसैले त्यहाँका बिरामीलाई ‘त्यतै आइसियू मिलाउन प्रयास गर्नू’ भन्छौं। नेपालगञ्जबाट फोन आयो भने ‘चितवनमा हेर्नू’ भन्छौं।’
केहीले ‘नन कोभिड’ सेवालाई घटाएर कोभिड सेवा बढाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्।
पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य भन्छन्, ‘अहिले मानिसहरू तुरून्तै अस्पताल नआउँदा समस्या भएको छ। कतिले परीक्षण नै गर्नुहुन्न। पछि समस्या जटिल भएपछि मात्र आउनुहुन्छ। आएकाहरूमा जटिल कोभिड निमोनियाको समस्या देखिएको छ।’